Oromummaa Foundation Dhaabbata Namoomaa ummata Oromoof Dhimmuu dha. Oromummaa Foundation jecha gabaabaan DNUOD jedhama. Sochiin Bu’uura Oromummaa eessattillee, bakkee ilmaan Oromoo jiraatan maratti gaggeeffamuu dandaya. Dhimmoota adda addaa kan akka mirga namoomaa, gargaarsa, dagaagina ilaalchaa fi tokkummaa ummata Oromoo ijaaru’rratti hojjanna.
Caalatti sochiin Oromummaa Foundation dhimma mirga baqattootaa, /namoota kooli galtummaa gaafatn, dhimma hidhamtoota siyaasaa fi Daa’imman maatii hin qabneetti xiyyeeffata. Rakkinoota Ummata Oromoof furmaata maayyii fiduuf akkasumas sochii mirga namoomaa qindoominaan gaggeessuuf Oromummaa Foundation ijaarsa Tokkummaa Ummata Oromoo sadarkaa guutuu Addunyaatti gaggeessu’rratti fulleeffatee jira. Eyyen Oromummaa Foundation dhimmoota Oromoo ilaalatani’rratti hojjachuuf hundeefame. Hata’u malee sab-lammoota biyya Oromiyaa keessa jiraatan kaanifillee garagaarsa namoomaa nikkennaaf. Rakkinoota ummata Oromoo ykn ummata Afrikaa mudatan furuuf Oromummaa Foundation dhaabbolee dhimma naannoolee, kutaalee, biyyoolessa, ardii fi dhaabbolee idil-addunhyaa waliin ni hojjata.
Walii galli kaayyoo, ilaalcha fi galmi Oromummaa Foundation dimokiraasii, nageenya, haqaa fi dagaagina Oromiyaa/Itoopiyaa dhugoomsuu’rratti fulleefata. Addunyaa nageenyaa fi gammachuun gutamte uumutti xiyyeeffata!
WTUOGA (Waldaan Tokkummaa Ummata Oromoo Guutuu Addunyaa) akeeka, kaayyoo fi galma Oromummaa Foundation tiin karoorfame galmaan ga’uuf Caayaa Bu’uura Oromummaajalatti hundeefame. Akkasumas dhimmoota Oromoo ilaalatan kimirrattiyyuu qooda fudhachuu ni dandaya. (Otoo uunkaa miseensummaa kana hin guutiin dura kaayyoo, akeeka, ejjannoo ilaalchaa, ulaagaa miseensummaa, mirgaa fi dirqama meiseensota WTUOGA dursaa mee dubbisaa maaloo).
* Required information. | Odeefannoo Barbaadamu.
Maqaa Akaakayyuu *
Teessoo(maqaa karaa fi Lakk.manaa *
Lakk.Saanduqa Poostaa *
Akeeka, Kaayyoo fi galma Oromummaa Foundation, Seeraa fi heera, ejjannoo ilaalchaa, ulaagaa miseensummaa, mirgaa fi dirqama miseensota WTUOGA dubbisee hubadheera. Kanaafuu unkaa miseensummaa kana guutuu dhaan miseensa Waldaa Tokkummaa Ummata Oromoo Guutuu Addunyaa ta’uu koon mirkaneessa.
Hubachiisa!Namootinni unkaa miseensummaa “onlina”guutan miseensa WTUOGA seera qabeessa kan ta’uu dandayan yoo ykn erga e.meelli isaanii abbaa taayitaa Oromummaa Foundation ykn WTUOGA qaqqabee mirkaneeffamee qofaadha. Kun kan barbaachiseef dogoggoraa fi gelmee seeran alaa daangessuufi.